Ngwa ngwa ngwa eriri eriri, eriri ngwa anya eriri - Qingying
Ngwa ngwa ngwa ngwa anya eriri
Pọtụfoliyo ngwaahịa anyị nwere nnukwu yana nhọrọ ọnụnọ ọkachamara anyị na-eme ka nzaghachi ndị ahịa ngwa ngwa, ikike ọrụ aka, na ike iji rụọ ọrụ site na nsogbu ọ bụla enwere ike nye ma obere azụmaahịa ma nnukwu.
Onye nrụpụta kacha
Ngosipụta akụrụngwa ule
Nnyocha nyocha aka Zirconia
Ihe osise 3D nke ngwaahịa
Mgbakọ njikọ ngwa ngwa
Ebe Mmepụta Ihe nkwụnye
Ebe Nrụpụta Fiber Patch Cord
Nnyocha nyocha ihu
Ntinye nnwale nnwale
Tọrọ ntọala na 2010, Dongguan Qingying Industrial Co., Ltd. (QY) bụ ụlọ ọrụ eriri ọkaibe dị na obodo abụọ, Dongguan na Chongqing, na China. N'ihe karịrị 10,000m2 mpaghara osisi, QY bụzi ụlọ ọrụ nwere ike R&D, mmepụta, azụmaahịa na ahịa mba ofesi. QY bụ ụlọ ọrụ ISO9001, ROHS, CE nwere ọtụtụ narị ndị ahịa na Europe, America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Australia. Ngwaahịa anyị bụ isi ihe njikọ fiber optic (njikọ ngwa ngwa), ihe nkwụnye ọkụ, ụdọ patch, armatch patch cord, pigtail, PLC splitter, attenuator, na ọtụtụ ngwaahịa FTTH ndị ọzọ. Site na ahụmịhe afọ 12 na ụlọ ọrụ fiber optic, QY kwenyere na mmụta, imekọ ihe ọnụ, na ịkekọrịta ndị ahịa bụ ụzọ kachasị mma iji too ndị ahịa. N'ime afọ iri na -abịanụ, QY ga -eji ike wepụta ngwaahịa ọhụrụ maka ihe ndị ahịa chọrọ, ma melite ogo ngwaahịa dị adị maka ndị ahịa. Ndị ọrụ QY niile na-atụ anya ijere ndị ahịa ozi na imekọ ihe ọnụ maka azụmahịa eriri n'ọdịnihu.
Taa ndị Qingying bụ ndị ahịa ụwa niile matara nke ọma na ụlọ ọrụ nkwukọrịta fiber optic.
Ndị ahịa anyị Taa Qingying bụ nke ama ama nke ọma na ụlọ ọrụ nkwukọrịta fiber optic site n'aka ndị ahịa ụwa niile. Omenala nke idu ndú na teknụzụ, ogo ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa enyerela ụlọ ọrụ aka ito ngwa ngwa Qingying enweela ọganiihu siri ike. Wle na -aga n'ihu na -aga n'ihu na -arịwanye elu na -achọ ma na -agba mbọ maka ịdị mma.
St Duplex njikọ, Fast njikọ, Eriri Fast njikọ, Njikọ Njikọ Njikọ, Fiber Optic njikọ nkwụnye, Eriri Optic USB njikọ,